Ny Steroids Anabolic Most Popular Anabolic Materials | AASraw Steroids
Posted on 07 / 18 / 2019 by Dr. Patrick Young nanoratra tao Gallery.
Araka ny filazan'ny 4 taona lasa ny taham-pivarotana varotra sy fangatahana isan-karazany, dia namintina ny loharano 10 malaza indrindra momba ny steroid anabolic (AAS) ho an'ny laboratoara, mpivarotra ary mpanjifa mifandraika.
Nalainay ny loharanon-kery lehibe indrindra tamin'ny indostria. Ho an'ny lisitra feno, jereo ny populaire malaza 10 anabolic steroids raw material.
Lehibe lehibe indrindra amin'ny varotra AAS Raws material: Ny ampahany lehibe indrindra amin'ny vola miditra amin'ny AAS Raws: Ny fitaovam-pandaharana tsara indrindra:
Testosterone Enathate / Testo E / Test E poids
Rating:★★★★★ Methandrostenolone / Dianabol poids
Ny fivarotam-bokatra lehibe indrindra amin'ny AAS antsika
Ny mora vidy sy mora vidy amin'ny AAS
Trenbolone Acetate volo volo dia mahery kokoa noho ny Trenbolone Enanthate noho ny ezantin'ny Enanthate izay manangom-bolo betsaka ao amin'ilay fitambarana.
Ny ankamaroan'ny mpampiasa dia mandeha amin'ny hormone Trenbolone foana dia ny vovo-dronono Trenbolone Acetate.
Dinandrol dia mety ho tena mahasoa ny fananganana betsaka.
Ny voka-dratsin'ny Dinandrol dia mora kokoa ny mitazona indray ny fampiasana azy raha oharina amin'ny steroïde.
Ity ny Top Top 10 Popular Steroids Anabolic raw material:
Ny testosterone dia manala volo moka - Ny ankamaroan'ny voankazo maloto indrindra
Mofo volo mendandrostenolone - Ny ankamaroan'ny fantsom-pihetseham-po amin'ny rongony
Trenbolone Dikan-tsakafo mena - Hatraiza hatraiza ny herin'ny satroboninahitra
Oxandrolone roapolo - Ny ankamaroan'ny vehivavy indrindra amin'ny fampiasana steroïd hormones
Stanozolol mofomamy - Ny ankabeazan'ny populaire populaire dia mahazo fihenam-bidy
Ny Hormone - Ny ankamaroan'ny peptide malaza
Nandrolone Decanoate volo mangatsiaka - Ny steroïde amin'ny ankapobeny
Boldenone tsy mamoaka rano mangatsiaka - Ny steroïde amin'ny ankapobeny
Drostanolone Propionate volo volo - Most steroids Exotic Overall
Manana vovony mena ny molekiolana - Ny fiantraikany ratsy indrindra amin'ny steroids
Misy endritsoratra vitsivitsy ilaina hitadiavana ny fisafidianana ny steroids Anabolic. Ho an'ny labs, ny vokatra malaza dia mila atao ho takelaka na capsules. Ny fitaovam-pandrika dia fitaovana fisakafoanana, tabilao pil, kapsily napetraka, kapa masaka, sns. Izany fitaovana be dia be dia be izany fa hanampy amin'ny fananganana marika sy hahazoana asa maharitra.
Oxandrolone (Anavar) mena
Stanozolol (Winstrol / winny) roapolo
Methandrostenolone (Dianabol) mena
Ny ankabeazan'ny testosterone
Ny ankamaroan'ny andian-tantara Boldenone
1-Testosteron fototra / DHB
DIY sy Homebrewer
Ny cookie ho an'ny DIY (DIY) dia tsara kokoa hanomboka amin'ny steroids mora kokoa, miaraka amin'ny tebiteby kely ary matetika hita solvents sy ny oils carrier. Ny steroïda omena torohevitra dia azo jerena toy ny etsy ambany:
Testosterone cypionate poids
Decontaine Nandrolone Decanoate (DECA)
Nandrolone phenylpropionate / NPP poids
Trenbolone Dikan-tsakafo mena
Boldenone Undecylenate / Equipoise mofomamy mangatsiaka
Drostanolone / Masteron Enanthate vovoka
Drostanolone / Masteron Propionate vovoka
Testosteorne dia mampihena vovony mena Mofo volo mendandrostenolone Trenbolone Dikan-tsakafo mena Oxandrolone roapolo Stanozolol mofomamy Hormonal Growth Human Nandrolone Decanoate volo mangatsiaka Boldenone tsy mamoaka rano mangatsiaka Drostanolone Propionate volo volo Manana vovony mena ny molekiolana
Manatsara ny fahasarotana
1. Ny testosterone dia mampihena vovony
Ny testosterone Enanthate dia vaksina madio ary testosterone madio miaraka amin'ny ezetera efa mihetsiketsika sady mihazakazaka ary testosterone ny laza malaza. Toy ny Propionate version dia iray amin'ireo endrika mahazatra indrindra ampiasain'ny atleta fampiroboroboana fampiroboroboana. Raha ny toetra voajanaharin'ny Testosterone Enanthate, dia ny valiny marina dia azo atao raha oharina amin'ny dika mitovy Propionate mihevitra ny doses mitovy.
2. Mofo volo mendandrostenolone
Ny volo mena mothandrostenolone dia iray amin'ny populaire malaza indrindra sy iray amin'ireo steroids manan-danja indrindra amin'ny fotoana rehetra. Raha tsy misy fanontaniana, io no steroid indrindra amin'ny tsiranoka amin'ny tsimok'aretina indrindra mba hitsikerana ny tsena ary iray amin'ny steroids malaza indrindra amin'ny endriny rehetra. Raha toa ka hita matetika ho toy ny takelaka am-bava, ny volo mangatsiaka Methandrostenolone dia azo raisina ho toy ny vahaolana azo ampiasaina, fa ireo takelaka kosa dia ny làlana voalohany amin'ny fitantanana.
3. Trenbolone maka vovony mena
Ny eteteta acetate dia ettera fohy kely mifandray amin'ny molekiolan'i Finaplix. Manana fiainana mavitrika amin'ny andron'ny andro 2-3 izy io fa ny fitazonana ny tahan'ny tibôlôlika avo lenta sy maharitra, matetika ny soso-kevitra isan'andro. Ny esterate acetate dia manome fifantohana haingam-pandehan'ny hormone izay mahasoa ireo mitady fividianana haingana, miaraka amin'ny fotoana fivoahana haingana dia mety hajanona ny estera acetate rehefa manomboka ny vokany ratsy.
4. Oxandrolone roapolo
5. Stanozolol tsy misy vovoka
Na dia iray amin'ireo steroide anabolic fanta-daza indrindra aza, ny vovobony ao Stanozolol dia malaza be indrindra amin'ny ankamaroan'ny steroid mampiasa ny mponina. Amin'ny endriny maro, ny steroid anabolic mora dia mora azo ampiasaina amin'ny lehilahy sy ny vehivavy. Zava-dehibe toy izany koa, dia voaporofo fa tena mahomby amin'ny fanatsarana ny tetikasam-pampandrosoana maro.
6. Hormonal Growth Human
7. Nandrolone Decanoate volo mangatsiaka
Ny menaka vovoka Nandrolone Decanoate dia iray amin'ireo fampiasana steroids amin'ny anabolika indrindra amin'ny atleta fampiroboroboana. Fantatra tsara amin'ny maha-steroid be loatra azy ny fahaverezan-tsolika, fa tena tiany koa izany amin'ny faribolan'ny atletika maro ho an'ny tombontsoa ara-pahasalamana. Noho ny tombontsoa ara-pahasalamana goavambe, ny hormone Nandrolone dia iray amin'ireo fitsaboana anabolika mahasoa indrindra amin'ny fitsaboana
8. Boldenone tsy mamoaka rano mangatsiaka
Boldenone Undecylenate ronono dia testosterone iray avy amin'ny steroid anabolic androgenic ary dia endrika fanovana endrika testosterone. Fiovana kely tsy dia lehibe loatra amin'ny fifandraisana ety ivelany amin'ny karbôna iray sy toerana roa. Ny esdecylenate ester dia mamela ny famoahana tampoka ao Boldenone eo ho eo amin'ny 3-4 andro aorian'ny fampidirana, miaraka amina fanandramana tsy tapaka ny hormonina manaraka mandritra ny 21 andro.
9. Drostanolone Propionate volo volo
Ny ankamaroan'ny Masteron rehetra eny an-tsena dia Drostanolone Propionate ny vovony menaka. Drostanolone Propionate ny vovoka menaka dia dihydrotestosterone (DHT) avy amin'ny steroid anabolic. Raha ny tena izy, ny Masteron dia ny hormone DHT izay novaina tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny alalan'ny fampidirana ny methyl group ao amin'ny toerana karbona 2, Izany dia miaro ny hormonina amin'ny fivoahana metabolika amin'ny enzyme 3-hydroxysteroid dehydrogenase, izay hita ao amin'ny musculaire skeletal. Mampitombo be ny natiora koa izany.
Iray amin'ireo malaza indrindra amin'ireo olona mifaninana na mikaroka fikarakarana ara-bika
10. Manana vovony mena ny molekiolana
Ny mofomamy miorenolone Enanthate dia heverina ho iray amin'ny steroids azo antoka anabolika eo amin'ny tsena ary mitondra fiarovam-bidy tena tsara ho an'ny famerenana izany fanambarana izany. Raha ny marina, ity steroid ity dia nampiasaina tamim-pahombiazana amin'ny fitondrana zaza tsy ampy taona sy ny zaza tsy ampy taona tsy misy fahasimbana. Voatendry ihany koa ho an'ny osteoporose sy sarcopenia.
Genius AAS loharano loham-be azo alaina alohan'ny hividianana azy
Raha mikasika ny fitaovam-pitsaboana ny famokarana steroid, dia maro no mijery ny famokarana any Chine. Eto ny fitaovana ampiasaina amin'ny famokarana anabolic dia alefa any amin'ny firenen-kafa. Ny fitaovam-pitaovana ho an'ny steroides avy any Shina dia malaza amin'ny antony maro:
Ao Shina dia manana kalitao avo lenta izy.
Fankatoavana ny fenitra rehetra.
Ny fananana fahazoan-dàlana hamokarana sy fivarotana.
Ny solifera voajanahary sy am-piandohana, izay azo ampiasaina amin'ny famokarana.
Ny teboka farany ho an'ny mpanamboatra steroid maro no tena manan-danja indrindra. Izany dia satria io no fomba tsotra indrindra mividy fitaovana ho an'ny steroid avy ao Shina. Maro ireo orinasa tafiditra amin'ny fivarotana eto, ary tsy ilaina ny manome antontan-taratasy fanampiny momba ny fividianana entana. Tsy midika izany fa any Shina dia afaka mividy fitaovana ho an'ny vokatra any an-trano ianao. Tsia, misy orinasa sy orinasa lehibe mivarotra entana amin'ny orinasa. Mba hividianana izany fahazoan-dàlana ampy ho an'ny famokarana sy mari-pamantarana marobe.
Ny orinasa sasany dia mila antontan-taratasy fanampiny, alohan'ny hividianana vovoka ho an'ny famokarana steroïde, tsara kokoa ny mifandray amin'ny orinasa ary manontany hoe iza amin'ireo antontan-taratasy ilaina amin'izany. Aorian'izany dia azo vidiana amin'ny fitaovam-pitaovam-pandrefesana avy any Shina ny entana ary entina any amin'ny firenena izay famokarana fanafody anabolic sy androgenic.
Fa, ho an'ny laboratoara ambanin'ny tany (ugl) na ny tena manokana, tsy azo atao ny manolotra tahirin-kevitra momba ny ordinatera na legioma ho an'ny tanjona ara-barotra toy izany, misy loharano manodidina ny tsena mba hifanaraka amin'izany. Noho izany, alohan'ny hividiananao ny fitaovam-piasana tianao, tadiavo ny marina sy ny genius, mba hiarovana ny tenanao amin'ny sandoka.
1. Ahoana no ahazoana antoka ny kalitaon'ny vokatra alohan'ny hametrahana baiko?
A: COA, HPLC, HNMR no misy.
B: Ny fizarana taratasy avy amin'ny laboratoara fahatelo dia homena fotoana fohy.
2.Manao antoka ve ny volanao?
Ny lamim-panafody ho an'ny vovònanay dia azo averina alaina mialohan'ny halefan'ny entana.
3.Can azonao antoka ve ny fampahafantarana?
4.Hahanao manomboka ny baiko sy manao fanonerana?
Tombontsoa avy amin'ny steroid Anabolic Raw material
Tsy misy fitaovana entina mivoaka avy any amin'ny laboratoara ambanin'ny tany, rehefa mamboly azy.
Tsy dia mandany vola amin'ny tsingerinao ianao amin'ny fampiasanao fitaovam-piasana. Na ny olona iray manana vola voafetra aza dia mety hahatratra ny nofinofy bodybuilding.
Mba hampivoarana ny loharanon-karena AAS ho lasa mpanankarena
Hanorina ny marika manokana sy ho zavatra eto amin'ity faribolana ity
Manao fikarohana momba ny fampiasana sy manampy ny hafa.
DECA Pulver-Ultimate Guide Ahoana no fanaovana Decandrate Nandrolone (Durabolin)	Ny MK-677 (Ibutamoren) mandeha tsara amin'ny hozatra ho an'ny hozatra? Review Sarm [2019 NEW]